1 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
2 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
3 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
4 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
5 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
6 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
7 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
8 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
9 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
10 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
11 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
12 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
13 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
14 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
15 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
16 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
17 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
18 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
19 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
20 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
21 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
22 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
23 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
24 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
25 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
26 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
27 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
28 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
29 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
30 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
31 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
32 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images
33 of 33 · East gate prayer hall at Shwedagon Paya. Image by Merten Snijders / Getty Images